WTTC inoedza kubatanidza dzimwe dzenyika kuti zviitwezve mukushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Tourism Kutaura » WTTC inoedza kubatanidza dzimwe dzenyika kuti zviitwezve mukushanya
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • dzidzo • Hurumende Nhau • Hotera & Resorts • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
178406484 10227109561395392 7245927475485412884 m
WTTC yakazviita. Yekutanga musangano wepasirese wekushanya uye wekushanya kubva pakatanga COVID-19. Cancun, Mexico ndiyo yaive nzvimbo uye vatori vechikamu vanobva munyika dzakasiyana siyana vakawana zororo kubva kuCoronavirus vachikurukura danho rinotevera rekushanya.
Pane zvakawanda zvekuita, kune zvakawanda zvekusarongeka nematambudziko. Dzimwe dzenyaya dzakadai dzakabuda pachena.
Wakarasikirwa neWTTC Summit muCancun? Tarisa chiitiko chese pa eTurboNews kubva ichi chinyorwa papeji 3.
Vamwe vevatungamiriri vepasirese uye vepasirese vatungamiriri veKufamba & Tourism vatora danho rakabatana kuti vatangise zvakachengeteka kufamba kwenyika dzepasi pose pakuvharwa kweWorld Travel & Tourism CouncilWTTC) Global Summit.
Global Summit yakadoma Carnival Corporation Mutungamiri uye CEO, Arnold Donald, sachigaro mutsva weWTTC, inomiririra makambani mahombe mubazi repasirese reKufamba neKushanya.
Nhengo dzakakosha mumusangano uchangopedzwa dzakakurukura nezvekuti pamwe vangatangazve zvakachengeteka kufamba kwenyika dzese, vakatarisa kune ramangwana rakatogadzikana uye rinosanganisira chikamu ichi.
Sachigaro mutsva weWTTC akatora chinzvimbo kubva kuSachigaro arikubuda, Chris Nassetta, Mutungamiri uye CEO weHilton, mushure memakore matatu akabudirira ari mutungamiriri weWTTC.
Kutevera kubudirira kwe2-mazuva eCancun Global Summit, WTTC yakazivisa Manila, guta guru rePhilippines, ichave inotungamira yayo inotevera Global Summit nemazuva achasimbiswa.
Vatungamiriri mazana matanhatu + vezvemabhizimusi, makurukota ehurumende, pamwe nevagadziri vezvisarudzo kubva kumatunhu epasi rese eTravel & Tourism vakaungana pamwechete kuMexico kuti vakurukure nzira yekudzoserwa kweiyo chikamu chakasungwa.
Zvaive pachena, kutora chikamu kwakasiyana nedunhu, zvichiita paMusangano wekumiririrwa kwenzvimbo. Vatungamiriri vanobva kuEuropean Union nekuSouth Africa havana kuonekwa pachavo, asi humwe hunhu hwakakosha saGurukota rezveKushanya kubva kuBrazil; Roger Dow, mukuru weUS Travel Association; kana Isabell Hill, Dhairekita weHofisi yeKufamba neKushanya, United States Dhipatimendi reZvekutengeserana, rakapinda nekukwikwidzana.
Puerto Rico ndiyo yaive nzvimbo yekutanga yemusangano we2020. Musangano we2020 wakaendeswa kuCancun. Chikonzero chepamutemo chaive nekuda kwekukuvara kwedutu. 2020 haina kuitika kusvika parizvino muna 2021. Naizvozvo WTTC yakapembererawo makore makumi matatu muCancun.
Izvo hazvina kushamisika kuti Puerto Rico yanga isina chikamu kana yakaonekwa kumusangano weWTTC vhiki ino.
Sekureva kwenhepfenyuro yePuerto Rico Tourism Co yakamhan'arira World Travel uye Tourism Council (WTTC) ichida kudzoreredzwa madhora miriyoni imwe nemazana mashanu akabhadharwa sechikamu chechibvumirano - icho chakatyorwa - kuti vaite musangano uyu. kune chikumbiro chakaiswa kuSan Juan Superior Court.
MunaGunyana 2019, chiitiko chemunharaunda chakabatana, Tsvaga Puerto Rico, yakasaina Memorandamu yeKunzwisisa neUK-based WTTC kuitisa 2020 WTTC Global Summit pachitsuwa cheUS muna Kubvumbi 2020. Iyo WTTC yaida madhora mamirioni mana kubva kumubati kuunza iyo chiitiko kuPuerto Rico.
Nekudaro, muna Ndira 2020, WTTC yakazivisa kuti yaisazobata chiitiko kuPuerto Rico, ichichiendesa kuCancún, Mexico pachinzvimbo. Pamwe chete nechiziviso ichi kwaive kusimbiswa kweWTTC kune Tourism Co kuti yaizobhadhara iyo $ 1.5 miriyoni yakazara, kana hurumende ikabvuma kudzimiswa kwechiitiko ichi, maererano nematare.
Zvakare zvakashaikwa muCancun yaive iyo World Tourism Sangano (UNWTO). Apo Dr. Taleb Rifai aive Secretary-General weUNWTO vese WTTC neUNWTO vaigara vachionekwa pamwechete uye vachironga zviitiko. Izvi zvakamira apo Georgian National Zurab Pololikashvili akatora mutungamiriri wesangano rakabatana-UN muna 2018. Kusimbisa kuti UNWTO yakarasika zvakadii mukukosha munyika yepasirese yekushanya yaive chokwadi nhengo zhinji dzehurumende dzeUNWTO ikozvino dzava kutarisa WTTC sevanovimbika. Iyo inotsanangura kufarira kwakanyanya neveveruzhinji chikamu kuvewo chikamu cheWTTC mamiriro ekugadzirisa.
Kunyangwe WTTC ichimiririra makambani makuru ekufamba munyika, nekuda kwedenda kana nhengo-yenzvimbo dzekushanya dzinoenderana nenzvimbo dzinosanganisira Nepal, Asia, ne Africa, Pacific haina kukwanisa kuve chikamu cheiyi ingangoita hurukuro inokosha. Gurukota reJamaica Edmund Bartlett akapa izwi kune vazhinji vavo. Juergen Steinmetz, Sachigaro weWorld Tourism Network (WTN) anomiririra makambani mazhinji ari pakati nepakati uye mudiki munyika zana nemakumi manomwe nenomwe, akaona chiitiko ichi seasiri nhengo.
Iye ainyanya kuverengera kutora chikamu uye iye munhu achigashira kuzivikanwa kwakawanda nemubairo aive Hon. Ahmed Al Khateeb, Gurukota rezvekushanya kuSaudi Arabia. Akaendesa zvakare hurukuro yakakosha. Saudi Arabia yakapihwa mukana weWTTC kuve nehofisi yedunhu muhumambo hwayo. Saudi Arabia yakasvikawo kuMexico neCaribbean nemikana yekudyara pamwe nekubatana. Saudi Arabia iri zvakare imba yenzvimbo nyowani yedunhu UNWTO nzvimbo uye nzvimbo ine Global Tourism Resilience uye Crisis Management Center yakarongwa futi. Minister vakataura apo nyika yavo yakazivisa mavhiza ezvekushanya pasati pasvika nyika yakarohwa neCOVID-19, zvikumbiro makumi mana zvaitarisirwa. Chokwadi chaive 40,000.
Vapikisi vakanangana neUS, Canada, Europe, neAustralia vakayambira nezvekutyorwa kwakanyanya kwekodzero dzevanhu muSaudi Arabia. Icho chokwadi, zvakadaro, ndechekuti kunyangwe paine matambudziko aya, kugona kwekushanya kwehumambo kwakakura.
Majekiseni chete haazi mhinduro. Verenga nezve izvi nemamwe matambudziko akurukurwa uye onai chiitiko chakachengetedzwa pamhepo. Dzvanya pane NEXT PEJI.
Mumwe weVashumiri veVashanyi vepasirese uye mutsigiri wezvekudiwa kwenzvimbo diki dzinoenda kunzvimbo dzekushanya, Hon. Edmund Bartlett anobva kuJamaica parizvino ava nemavhiki maviri achivharirwa oga paakadzokera kuJamaica. Aiziva kukosha kwechiitiko ichi muCancun kuunza zvinetswa zveCaribbean nedzimwe nzvimbo diki kukwikwidza nenyika hombe dzakasimukira kusanganisira US, Europe, uye UK.
Majekiseni chete haagoni kuva mhinduro. Panofanirwa kuve neyakaenzana yekuenzanirana. IUK ingadai iine mhosva ye "vaccine zvematongerwo enyika" uye rusarura rusarura dai zvairambidza kufamba kuenda kunyika dzakaita seJamaica mwedzi unouya nechikonzero chekuti nhamba dzekudzivirira munyika dzakaita seJamaica dzakanyanya.
Pane kudaro, VaBartlett vakakurudzira UK kuti iremekedze hukama hwayo hweCommonwealth nekugovana majekiseni ayo neJamaica nedzimwe nyika dzine hurombo.
Chokwadi ndechekuti nyika gumi dzaive dzakakona zvinopfuura makumi manomwe kubva muzana muzana majekiseni ese epasi uye aibaya nhomba dzawo zvakapetwa kashanu chiyero chenyika dzese.
Chokwadi ndechekuti zhinji dzenyika dzinonzi dzine hurombo dzakakwanisa kuchengetedza vese vashanyi nevagari kuchengetedzeka kupfuura nyika dzakapfuma dzine maprotocol akaomarara akagadzirirwa mamiriro acho ega. Nhengo zhinji diki- nepakati nepakati dzeWorld Tourism Network (WTN) dziri kunetsekana nekusaenzana uku uye vanonzwa kuchikuvadza kupora. "Takachengeteka chete kana tese takachengeteka," akadaro Mutungamiriri weUS Biden. Paive nemakumi manomwe aimbova maHead of State neNobel Prize vakagashira vakakurudzira Mutungamiriri weUS kuti asundire kuregererwa kwenguva pfupi kwekudzivirirwa kwepatent kuitira kuti nyika dzine hurombo dzikwanise kugadzira kana kuwana majekiseni ekudzivirira vanhu vadzo. Muenzaniso wakaomesesa urikuenderera mberi muIndia.
Mune yekutanga-nyika, WTTC yakaronga chiitiko chayo kekutanga munhu kubva kubva pakatanga denda - nemakumi ezviuru zvevamwe vachijoinha zvirinani - vachiteerera nemabatiro akasimba epasi rose ehutano nehutsanana. eTurboNews yakapa network yayo yepasirese kuWTTC yekubvumirana. Nhengo dzese dzeWTN dzakakokwawo kuti vatarise vapenyu uye vataurirane nevatori vechikamu veWTN muCancun kuburikidza neWhatsApp.
Kuedzwa nguva dzose kwakaitwa kuti kuwanikwe kune vese vamiriri vanopinda kwenguva yeMusangano kuti vaone kuti kuchengetedzeka kwavo kwaikosha.
Kubva pamiyedzo chiuru, zviviri kana zvitatu zvakadzoka zvakanaka. "Hatina kubvumira avo vakaedzwa kuti vapinde munzvimbo yechiitiko," akadaro Gloria Guevara, Mutungamiri weWTTC & CEO.
Gloria akati: "WTTC yakaunza pamwechete vatungamiriri vane hunyanzvi kubva munzvimbo dzakazvimirira nedzeruzhinji muTravel & Tourism paGlobal Summit yedu, vakabatana mukuda kwavo kumutsiridza zvakachengeteka kufamba kwenyika.
“Kuvapo kwedu chaiko kuno, kunoratidza kuti tinogona kutangazve kufamba kune dzimwe nyika zvakare nekucherechedza zvirongwa zvazvino zvehutano nekuchengeteka, izvo zvakabatsirwa neWTTC kuvandudza mabhizimusi makuru nediki munharaunda yese.
“Tese takaratidza kuti takabatana, mapato akazvimirira pamwe neveruzhinji muTravel & Tourism vanokwanisa kushandura shanduko voita kuti nyika itangezve kufamba kuitira kuti titange kufamba, kuongorora nekugovana zvatakasangana takatarisana.
"Takapedzisa Global Summit yedu pano kuCancun tiine chivimbo chekuti pamwe chete tinogona kumutsiridza chikamu chichaunza hupfumi hwenyika nekudzosa vanhu pamwe chete nekuda kwekunakirwa kunoshamisa kunogona kuunzwa neTravel & Tourism."
Pasi pemusoro wenyaya we "Kubatanidza Nyika Kudzoreredza," maMinisitiri eVashanyi kubva kumativi ese epasi uye vatungamiriri vebhizimusi reTravel & Tourism vakabvumirana kuti panodiwa kubatana kukuru kweveruzhinji uye kwakazvimirira.
Pamusangano weWTTC Global Vatungamiriri Dialogue, vakakavadzana kuti chikamu ichi chingagadzirise sei nyaya dzinonetsa dzekuchengetedza mabasa, kuchengetedza mabhizinesi, uye kutsigira hupfumi hwepasirese kuburikidza nerumutsiriro rwakachengeteka rwekufamba kwenyika dzese.
Kukosha kuri kukura kwekushandisa tekinoroji yedhijitari, senge biometric, simba guru mu post-COVID-19 nyika, yakaonekwa sekukosha mukugadzira rwendo rwekufambidzana, rwakachengeteka, uye rusina musono.
WTTC yakazvipirawo kushandira kune ramangwana rinosanganisira uye rinogadzikana. Yakavimbisa kukurudzira nekusimudzira kuenzana kwevakadzi nekuenzana, pamwe nekusimudzira kumiririrwa kwevakadzi mumabasa ekutungamira nekutanga yavo Initiative yeVakadzi nerubatsiro rwe18 Grand Slam singles yekuhwina mukombe, Martina Navratilova.
Global Summit yakaona kusainwa kweWTTC Women's Initiative Declaration, iyo yakacherekedza mupiro wevakadzi pasi rese uye kukosha kwenzvimbo yakaenzana yevakadzi kuti vabudirire sevatungamiriri, vezvemabhizimusi, uye vatsva.
Pa peji rinotevera, unogona kutarisa mazuva maviri echiitiko uchishandisa iyo eTurboNews rarama kutepfenyura. Dzvanya pane NEXT PEJI.